Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. चिया व्यवसाय संकटमा – Emountain TV
इलाम, ८ जेठ । इलामलाई चिनाउने चिया व्यवसाय अहिले संकटमा परेको छ । लकडाउनले चिया व्यवसाय संकटमा पर्दै गएको भन्दै इलामका किसान चिन्तित भएका छन् । मुख्य आयस्रोत नै चिया बनाएका इलामका किसानहरु आम्दानीको बाटो गुमे पछि चिन्तित भएका हुन् ।
कोरोनाको संक्रमण रोकथाम गर्न गरिएको लकडाउनले इलामको पर्याय बनेको चिया व्यवसाय संकटमा परेको छ । लकडाउनले उद्योगहरु बन्द भएपछि चिया व्यवसायी समस्यामा परेका छन् । पहिलो लटको गुणस्तरिय चिया नै नबिक्ने र टिप्नुपर्ने चियापत्ति पनि फाँड्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
यसबाट चियालाई नै रोजिरोटीको मुख्य माध्यम बनाएकाहरु संकटमा परेका छन् । लकडाउनमा चिया कारखाना नखुलेपछि किसानले चिया टिप्न पाएका छैनन भने बगानका मजदूर कामबिहीन भएका छन् । मुख्य आयस्रोतको बाटो नै बन्द भएपछि अब के गर्ने भन्ने चिन्ताले किसानलाई पिरोल्न थालेको छ ।
यसैगरी इलाम नगरपालिका २ को जस्बिरेका किसानहरु रायोको साग बजार पु¥याउन नसक्दा समस्यामा परेका छन् । सागसब्जीले बारी ढपक्क ढाकेको छ । चारैतिर हरियाली छ तर रायो साग फुलेर बारीमै कुहिन थालेका छन् ।
आम्दानीको मुख्य स्रोत बारी मै कुहिन थालेपछि किसानहरु चिन्तित भएका छन् । बिक्री गर्ने समय भइसकेको रायो साग बजारसम्म लैजान नसकिने र किन्नका लागि बारीमा व्यापारीहरु नआउने भएकाले तरकारी बारीमै कुहिने किसानहरुको चिन्ता छ ।।
अन्य समयमा तरकारी लिन गाडीहरु बारी सम्म पुग्ने गरेपनि यतिबेला लकडाउनले ठप्प भएको छ । जिल्लामा वार्षिक ९५ हजार ९४ मेट्रिक टन साग उत्पादन हुने गरेको छ । पाँच सय ३३ हेक्टरमा खेती गरेर किसानले प्रतिकिलो १० रुपैयाँले पनि नौ करोड ५९ लाख बराबरको साग वार्षिक उत्पादन गर्ने गरेका छन् ।
जिल्लाको रोङ गाउँपालिका, सूर्योदय नगरपालिका, इलाम नगरपालिकाका किसानले व्यावसायिक रूपमा सागको खेती गरेका छन् ।